Ubomi bomntu siqu kaDima Bilan buhlala buyimfihlakalo kwabanye. Umculi othandwayo uthetha ngeendaba ezizayo malunga nezicwangciso zakhe zokudala, wabelana ngezithombe ezintsha kwiikonsathi kunye nokuzonwabisa, kodwa ukhetha ukungabhengezi ubomi bakhe abucala.
Namhlanje kwiphepha lakhe kwi-Instagram uDima Bilan uxelele ngabantu bakhe abasondeleyo - uMama noTata. Umdlali wecala uthi ngamanye amaxesha ucinga ngabazali bakhe ... abahlali.
UDima Bilan uboniswe kwi-Instagram photo kunye noyise
Kwi-microblogging yakhe, umculi uthunyelwe isithunzi apho watywinwa khona kunye noyise. Umfanekiso uthathwa ekhitshini yabazali beenkwenkwezi. Etafileni - iziqhamo kunye nama-pastries, kodwa akukho utshwala.
UBilan uthe abazali bakhe abahloneli iziyobisi:
... etafileni akukho utywala, kwaye konke kuba abazali bam akakho "ukusela"! Ebomini, mhlawumbi amaxesha ambalwa ndawabona umama ngeglasi, kodwa ubaba akatsho nto nantoni na, konke oko! Maxa wambi ndibakhangela kwaye ndicinga-abafokazi!)
Abafaki baDima Bilan baya kuba nomdla ukwazi ukuba ebantwaneni bakhe abahlobo bakhe bahlala behlala kwindlu yabazali bomculi ukuba bahlale apho.
U-Anna Kalashnikova wayebizela ngokukhulelwa kwesithathu kwi-Alexei Panin, ividiyo
Umculi MakSim wuleza ukususa ukuvuma ngokucacileyo malunga noshintsho ebomini bakhe
Abazali uJeanne Friske kufuneka babuyisele iiruble ezigidi ezingama-21
UNatalia Krasko uxelele ukuba waba njani "okwesithathu"
Inkwenkwezi endala ye-Comedy Woman yayicingelwa ukuba ikhulelwe
Indlela yokukhetha udayi obunjani bomgangatho
Ukuthintela nokunyangwa kwe-acne ngexesha lokukhulelwa
Amaphiko enkukhu kunye namaapulo
U-Yuri Loza wayengabaza ukutshutshisa u-Yuri Gagarin
Imithetho yokwakha ukuzithemba ngokwaneleyo
Ingaphakathi kunye nemiqondiso ye-zodiac
Impembelelo yemidlalo yezemidlalo kwimpilo
Musa ukuphazamisa ubudlelwane kunye nendodana yakhe ngenxa yomyeni wakhe omtsha
Iibhonsi kunye nebhekoni kunye noshizi
Unxibelelwano lwendalo phakathi koomama nomntwana
U-Xenia Borodina waziqhayisa ngobomi obuhle